တရုတ်ပီကင်းဈေးကြီး မှာ ကိုဗစ် ကူးစက်မှု ရုတ်တရက် များပြားလာရခြင်း အကြောင်း အရင်း – Let Pan Daily
တရုတ်ပီကင်းဈေးကြီး မှာ ကိုဗစ် ကူးစက်မှု ရုတ်တရက် များပြားလာရခြင်း အကြောင်း အရင်း
န်လ ၁၉ ရက်နေ့ အထိ အဲ့ဒီဈေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုဗစ် ရောဂါသည် ၁၈၃ ယောက်တွေ့ထားပြီးပြီ။ တရုတ်က အမြဲတမ်း ကိုဗစ် ရောဂါသည်တွက်ရင် ရောဂါပိုးရှိပြီး လက္ခဏာမပြတဲ့သူတွေကို ထည့်မတွက်တော့ တကယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ အတိအကျမသိရဘူး။ ပြည်ပကတင်သွင်းတဲ့ အသားတွေက ပိုးကူးလာတယ် ထင်လို့ နမူနာပေါင်း 15600 ကိုစစ်ဆေးတာ အားလုံး (negative) ပိုးမတွေ့ဘူး။အဲ့ဒီဈေးတန်းထဲ လိုက်စစ်တော့ ပင်လယ်စာ၊ အမဲသားနဲ့ သိုးသားဆိုင်တွေမှာ အခြားနေရာတွေထက် ပိုးတွေ့တာပိုများနေတယ်။ ဖြစ်ရပ်က ဝူဟန်ဈေးကို စစ်ဆေးတုန်းက နဲ့တပုံစံထဲပဲ။ အဲ့ဒီတုန်းက တောတိရိစ္ဆန်ရိုင်းနဲ့ ပင်လယ်စာဘက် အတန်းတွေဖြစ်တဲ့ ဈေးအနောက်ဘက်အခြမ်းမှာတွေ့တာများတယ်။
A butcher (R) chops pork meat atamarket in Beijing on September 5, 2019. (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)
စိုစွတ်ပြီးအအေးဓာတ်များတဲ့ သားငါးဈေးတန်းတွေ မှာ ကိုဗစ် ပိုးပိုပွားတယ်ဆိုတဲ့သဘော။ ငါးကနေကူးတာလုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ငါးမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစေမယ့် receptor မရှိဘူး။ အခု ပီကင်းဈေးကတွေ့တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်က ဥရောပကတွေ့တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ သန္ဓေကွဲတူနိုင်တယ်လို့ဆိုပေမယ့် မျိုးရိုး စစ်ကြည့်တော့ အခုပီကင်းဈေးက ဗိုင်းရပ်စ်က ပိုစောနေတာကို တွေ့ရှိရတယ်။ အခုလို ပီကင်းဈေးက ဗိုင်းရပ်စ်က ဥရောပကတွေ့တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ထက် အဖေ့ထက်သားတစ်လကြီးနေတယ်ဆိုတာက ဥရောပကလာတုန်းက ရေခဲရိုက်ထားလို့ mutation မဖြစ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပီကင်းက ဗိုင်းရပ်စ်ကပိုစောနေတယ်ဆိုကတည်းက ဥရောပမှာ မပြန့်ခင် တရုတ်မှာအရင်ကတည်းကရှိပြီး ဥရောပကတင်သွင်းတဲ့ အသားတွေက ကူးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်။ အတိအကျတော့ မပြောနိုင်ပါ။
အခုလောလောဆယ်တော့ တရုတ်က ပြည်ပအဝင်အသားတွေကို သေချာ စစ်ဆေးနေပါပြီ။ တရုတ်ကဈေးမှာတွေ့တယ်ကြားတော့ နိုင်ငံအချို့ကလည်း ပြည်ပက တင်သွင်းတဲ့အသားတွေကို လန့်ဖြန့်ပြီးစစ်ဆေးကုန်ကြပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့အချက်က တရုတ်ပြည် အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပေးချက်က ဈေးထဲမှာ အသား ကို ရေပိုက်ခေါင်းအောက်ထားပြီးရေဖွင့်ချကာမဆေးသင့်ဘူး။ ပိုးပါရင် အနား ပတ်ဝန်းကျင်ကို စင်ကုန်မှာစိုးလို့တဲ့။ ကျနော်ကတော့ အဲ့ဒီအကြံပေးချက်ကို သဘောမတူပါ။ကြာသပတေးနေ့က နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ တရုတ်ပြည် ရဲ့ Covid-19 ကာကွယ်ရေး ညွှန်ကြားချက်ထဲမှာ အသစ်ထပ်တိုးတယ်။ အသားစိမ်းငါးစိမ်းကိုင်ထားပြီးရင် လက်ကို ဆပ်ပြာ၊ ရေနွေးပူတို့နဲ့အသေအချာဆေးပြီးရင် လက်ကိုမျက်စိနဲ့ နှာခေါင်းတို့ကိုမထိနဲ့။ ပြီးတော့ အသားငါးစိမ်းတွေကို ထပ်မကိုင်နဲ့တဲ့။ အဲ့ဒီအချက်ကို သဘောတူပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကဈေးတွေ မှာကတော့ ဘယ်လုပ်နိုင်ပါ့မလဲ။ အိမ်မှာတော့ လုပ်သင့်ပါတယ်။
တရုတျပီကငျးစြေးကွီး မှာ ကိုဗဈ ကူးစကျမှု ရုတျတရကျ မြားပွားလာရခွငျး အကွောငျး အရငျး
နျလ ၁၉ ရကျနေ့ အထိ အဲ့ဒီစြေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ကိုဗဈ ရောဂါသညျ ၁၈၃ ယောကျတှထေ့ားပွီးပွီ။ တရုတျက အမွဲတမျး ကိုဗဈ ရောဂါသညျတှကျရငျ ရောဂါပိုးရှိပွီး လက်ခဏာမပွတဲ့သူတှကေို ထညျ့မတှကျတော့ တကယျဘယျလောကျရှိလဲ အတိအကမြသိရဘူး။ ပွညျပကတငျသှငျးတဲ့ အသားတှကေ ပိုးကူးလာတယျ ထငျလို့ နမူနာပေါငျး 15600 ကိုစဈဆေးတာ အားလုံး (negative) ပိုးမတှဘေူ့း။အဲ့ဒီစြေးတနျးထဲ လိုကျစဈတော့ ပငျလယျစာ၊ အမဲသားနဲ့ သိုးသားဆိုငျတှမှော အခွားနရောတှထေကျ ပိုးတှတေ့ာပိုမြားနတေယျ။ ဖွဈရပျက ဝူဟနျစြေးကို စဈဆေးတုနျးက နဲ့တပုံစံထဲပဲ။ အဲ့ဒီတုနျးက တောတိရိစ်ဆနျရိုငျးနဲ့ ပငျလယျစာဘကျ အတနျးတှဖွေဈတဲ့ စြေးအနောကျဘကျအခွမျးမှာတှတေ့ာမြားတယျ။
FILE PHOTO: Customers wearing face masks buy pork meat at the Xinfadi wholesale market, as the country is hit by an outbreak of the novel coronavirus disease (COVID-19), in Beijing, China February 19, 2020. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo (Newscom TagID: rtrltwelve063787.jpg) [Photo via Newscom]
စိုစှတျပွီးအအေးဓာတျမြားတဲ့ သားငါးစြေးတနျးတှေ မှာ ကိုဗဈ ပိုးပိုပှားတယျဆိုတဲ့သဘော။ ငါးကနကေူးတာလုံးဝ မဖွဈနိုငျဘူး။ ငါးမှာ ဗိုငျးရပျဈကူးစမေယျ့ receptor မရှိဘူး။ အခု ပီကငျးစြေးကတှတေဲ့ ဗိုငျးရပျဈက ဥရောပကတှတေဲ့ ဗိုငျးရပျဈနဲ့ သန်ဓကှေဲတူနိုငျတယျလို့ဆိုပမေယျ့ မြိုးရိုး စဈကွညျ့တော့ အခုပီကငျးစြေးက ဗိုငျးရပျဈက ပိုစောနတောကို တှရှေိ့ရတယျ။ အခုလို ပီကငျးစြေးက ဗိုငျးရပျဈက ဥရောပကတှတေဲ့ ဗိုငျးရပျဈထကျ အဖထေ့ကျသားတဈလကွီးနတေယျဆိုတာက ဥရောပကလာတုနျးက ရခေဲရိုကျထားလို့ mutation မဖွဈတာလညျး ဖွဈနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ပီကငျးက ဗိုငျးရပျဈကပိုစောနတေယျဆိုကတညျးက ဥရောပမှာ မပွနျ့ခငျ တရုတျမှာအရငျကတညျးကရှိပွီး ဥရောပကတငျသှငျးတဲ့ အသားတှကေ ကူးတာမဖွဈနိုငျဘူးလို့ ကနြျောယူဆပါတယျ။ အတိအကတြော့ မပွောနိုငျပါ။
FILE PHOTO: Customers wearing face masks buy pork meat at the Xinfadi wholesale market, as the country is hit by an outbreak of the novel coronavirus disease (COVID-19), in Beijing, China February 19, 2020. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo
အခုလောလောဆယျတော့ တရုတျက ပွညျပအဝငျအသားတှကေို သခြော စဈဆေးနပေါပွီ။ တရုတျကစြေးမှာတှတေ့ယျကွားတော့ နိုငျငံအခြို့ကလညျး ပွညျပက တငျသှငျးတဲ့အသားတှကေို လနျ့ဖွနျ့ပွီးစဈဆေးကုနျကွပါတယျ။ အရေးကွီးတဲ့အခကျြက တရုတျပွညျ အမြိုးသားကနျြးမာရေးကျောမရှငျရဲ့ အကွံပေးခကျြက စြေးထဲမှာ အသား ကို ရပေိုကျခေါငျးအောကျထားပွီးရဖှေငျ့ခကြာမဆေးသငျ့ဘူး။ ပိုးပါရငျ အနား ပတျဝနျးကငျြကို စငျကုနျမှာစိုးလို့တဲ့။ ကနြျောကတော့ အဲ့ဒီအကွံပေးခကျြကို သဘောမတူပါ။ကွာသပတေးနကေ့ နောကျဆုံးထုတျပွနျတဲ့ တရုတျပွညျ ရဲ့ Covid-19 ကာကှယျရေး ညှနျကွားခကျြထဲမှာ အသဈထပျတိုးတယျ။ အသားစိမျးငါးစိမျးကိုငျထားပွီးရငျ လကျကို ဆပျပွာ၊ ရနှေေးပူတို့နဲ့အသအေခြာဆေးပွီးရငျ လကျကိုမကျြစိနဲ့ နှာခေါငျးတို့ကိုမထိနဲ့။ ပွီးတော့ အသားငါးစိမျးတှကေို ထပျမကိုငျနဲ့တဲ့။ အဲ့ဒီအခကျြကို သဘောတူပါတယျ။ မွနျမာပွညျကစြေးတှေ မှာကတော့ ဘယျလုပျနိုငျပါ့မလဲ။ အိမျမှာတော့ လုပျသငျ့ပါတယျ။
ဆူပွက် လာနေသော မြေထဲပင်လယ် အရှေ့ခြမ်း တင်းမာမှုကြီး